किन रोकियो त बरुणको बिहे ? हेर्नुहोस वास्तविक कारण – Khabar Silo
किन रोकियो त बरुणको बिहे ? हेर्नुहोस वास्तविक कारण
मुम्बई । बलिउड अभिनेता वरुण धवनको अर्को महिना हुने भनिएको विवाह केही समयका लागि स्थगित भएको छ । यतिबेला यी अभिनेता गत साता रिलिज भएको आफ्नो फिल्म ‘स्ट्रिट डान्स थ्री डी’ असफलताको पीडामा छन् ।
आफ्नी प्रेमिका नताशा दलालसँग उनी अर्को महिना मार्चमा विवाहको तयारीमा थिए । सो विवाहको लागि उनले थाइल्यान्डको एउटा पाँचतारे होटलसमेत बुक गरिसकेका थिए । विवाहको तयारी हुँदै गर्दा उनले केही समयको लागि आफ्नो विवाह रोकेको छन् ।
यी अभिनेताको गत वर्ष फिलम कलंक व्यावसायिक रूपमा पूर्ण असफल भयो । सो फिल्मपछि निकै सजक भएका वरुणलाई आफ्नो नयाँ फिल्म ‘स्ट्रिट डान्स थ्री डी’ हिट हुन्छ जस्तो लागेको थियो ।
तर यो फिल्म पनि बक्स अफिसमा यतिबेला फ्लप भएको छ । १ सय करोडको लगानीमा बनेको फिल्म ‘स्ट्रिट डान्स थ्री डी’ले बक्स अफिसमा दुई सातामा जम्मा ६८ करोडको मात्र ग्रस व्यापार गरेको छ । यसरी आफ्नो महत्वाकांक्षी फिल्म पनि असफल भएपछि उनको तत्काल विवाह गर्ने योजना रोकिएको छ ।
आफ्नो गृह ब्यानरको फिल्म कुली नम्बर १ मा पनि यी अभिनेता काम गरिरहेका छन् । विवाहका लागि धवन परिवार र दलाल परिवारसमेत तयारीमा जुटेको बेला वरुण आफैंले केही पछि गरौं भनी मार्चको मितिमा विवाह स्थागित गरेका हुन् । उनले पारिवारसँग पनि सल्लाह नगरी केही समयका लागि विवाह रोकेका हुन् । अब विवाह कहिले हुन्छ भनेर उनले नयाँ मिति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अघिल्लो साता छायाँकन एपिसोडहरु सकिएपछि भ्वाईस अफ नेपाल प्रसारण भएन । त्यससँगै धेरै दर्शक, श्रोताहरुले कौतुहलता जनाए, आज र भोली नकआउट चरण आउँछ कि आउँदैन । यसैबिच कार्यक्रमका प्रस्तोता तथा निर्माण शुसिल नेपालले यस्तो लेखेका छन् । नमस्कार सम्पूर्ण संगीत प्रेमी तथा भ्वाईस अफ नेपाल लाई माया गर्नु हुने दर्शकहरूलाई। गत हप्ता नकआउट चरण का […]
लोक दोहोरिको स्रष्ठाकै रुपमा स्थापित टीका सानुलाई पछिल्लो समय एकदमै भाइरल मुस्लिम गायक अलिफ खानले भेटेसगै आफुहरुले नया गित चाडै गर्ने र दर्शक स्रोताहरुको मुहारमा खुसि ल्याउनेमा आफुहरु बिश्वसेत रहेको समेत बताए । टीका सानू इन्द्रेणीको एकदमै प्रभावशाली लोक दोहोरि गायिका र नियमित गाइरहने अब्बल क्षमता भएकस स्रष्टा हुन्।अलिफ र टीका सानू बिचको दोहोरि र […]
टिकटकका भाइरल जोडी सरोज पर्जा र बिना बीच झगडा,सुभेक्षालाइ बिहे गर्ने तयारीमा!
काठमाडौँ : गायक युवराज मगरले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन्,उनी र मेलिना राईको स्वरमा ‘कोकाकोला फिगर ’बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतको रचना गायक प्रकाश सपूतले गरेका हुन् । युवराज मगरकै संगीत रहेको गीतलाई संजिव बराईलीले एरेन्ज गरेका हुन् । गीतलाइ संगीत म्युजिकको प्रस्तुति रहेको छ। गीतको भिडियोमा भने मोडल सरोज पर्जा ,सुबेक्षा मगर […]